ရုံးပတီသီးစားပြီးလျှင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်သွားလဲ ? ? ? – Shwe Innlay
HomeHealthရုံးပတီသီးစားပြီးလျှင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်သွားလဲ ? ? ?
ရုံးပတီသီးဟာ လူတိုင်းသိတဲ့အတိုင်း ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးရှိတဲ့ အသီးအနှံ တစ်မျိုးပါ။ သူ့ကို ပုံမှန်စားသုံးခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေများစွာကို ပြုလုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ ရုံးပတီသီးစားသုံးရတာကို ကြိုက်လျှင်တော့ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေကိုကြည့်ပြီး ဆက်လက်စားသုံးပါ။ မကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ အချက်တွေကို သေချာပြန်ဖတ်ပြီး စားသင့်၊မစားသင့်ကို ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါနော်။
၁။ရုံးပတီသီးဟာ အမျှင်ဓါတ် အလွန်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပြီး သူ့ရဲ့ဓါတ်တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ကောင်းစွာ စုပ်ယူပြီး ပြုပြင်ပြောင်လဲမှုများ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစာခြေစနစ်အတွက် အထူး အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးစွမ်းပါတယ်။
၂။ဆီးချိုသမားများအတွက်လည်း Glucose level ကို ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ ဓါတ်က သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို လိုတာထက် ပိုမများအောင် ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ ရုံးပတီသီးဟာ ဆီးချိုသမားများအတွက် နတ်ဆေးဆရာ တစ်ပါးပါပဲ။
၃။ဖောလစ်အက်ဆစ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ရုံးပတီသီးဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ စားသုံးသင့်တဲ့ အရာထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ မွေးဖွားမှုတွေ ၊ သားအိမ်တွင်းရှိ သန္ဓေသား ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လည်း စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ရုံးပတီသီးမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် K နှင့် ဖောလစ်အက်ဆစ်က အရိုးကို သန်မာအောင် အားပေးပြီး အရိုးပွခြင်းမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အရိုး၏ သိပ်သည်းဆကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
၅။ဗီတာမင် C နှင့် အခြားရောဂါ ကာကွယ်လျော့ပေါ့ပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်များကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဓါတ်တွေမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒါ့အပြင် လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေအရ ပန်းနာရင်ကြပ်သမားတွေကို အထူးသက်သာစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၆။ရုံးပတီသီးမှာပါဝင်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်က ရေဓါတ်ကို မဆုံးရှုံးအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သလို ချွဲကျိကျိဖြစ်စေတဲ့ အရာက အစာခြေစနစ်နှင့် ဆိုင်သော ကိုယ်တွင်းအစိတ်အပိုင်းကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝမ်းချုပ်တတ်သူများအတွက် သဘာဝ ဝမ်းနှုတ်ပေးနိုင်တဲ့ စားစရာတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
၇။အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် အူနှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါဘယများမှ နည်းပါစေသည့်အပြင် အူလမ်းကြောင်းကိုလည်း သန့်စင်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၈။ရုံးပတီသီးမှာ ကယ်လိုရီ လုံးဝမပါဝင်သော်လည်း သင့်ကို ဗိုက်ပြည့်နေသလို ခံစားရစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလွန်အကျွံ အစားအသောက် မစားမိအောင် ထိန်းပေးပြီး သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို မပိုစေတော့ပါဘူး။
၁၀။မကောင်းသော ကိုလက်စထရောများ မရှိခြင်းကြောင့် အဆိပ်အတောက်ကင်းကာ အသားအရေကို ကြည်လင်စေပါတယ်။
၁၁။ရုံးပတီသီးစားသုံးခြင်းက ဆံသားကို ပျော့ပြောင်းစေသည့်အပြင် ဦးရေပြားကို ကျန်းမာစေကာ ဗောက်များကိုလည်း ကင်းစင်စေပါတယ်။
၁၂။ရောဂါပိုးတွေ မဝင်နိုင်အောင် ၊ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ဖြစ်မလာအောင်လည်း တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်လို့ ကိုယ်ခံအားကောင်းကာ ကျန်းမာစေပါတယ်။
၁၃။ပရိုတိန်းဓါတ်ကြွယ်ဝလို့ သက်သက်လွတ်သမားတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။
ကဲ..ဒီအချက်အလက်တွေ ဖတ်ပြီးတာတောင် ရုံးပတီသီးကို မစားဘူးဆိုလျှင်တော့ သင့်လောက်မိုက်တဲ့သူ ရှိပါဦးမလား…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း ကီဝီသီးစားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
သွေးတိုးရှိသူများ သွေးပေါင်ချိန်မတက်စေဖို့ နေ့စဉ် စားပေးသင့်တဲ့ အရာများ